छोराछोरीलाइ फा’लेर श्रीमतीसंगै अंगालोमा बेरिएर त्रिसुलीमा हा’म्फाले ! उद्दार गर्दा श्रीमतीलाई समातेर बगिरहेका थिए विनय ! « Nipolnews
धादिङ- साहुको दबाब र चक्रवृत्ति ब्याज तिर्न नसकेपछि चन्द्रागिरि नगरपालिका–४, थानकोटका ३७ वर्षीय विनय लामिछाने बच्चासहित त्रिशूली नदीमा हा म फाल्न पुगेको तथ्य खुलेको छ । विनय र २७ वर्षीया श्रीमती जमुना रेग्मीले दुई वर्षीय र ६ महिनाका छोरा लिएर बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकामा पर्ने बाँदरे नजीकै त्रिशूली नदीमा बिहीबार साँझ हा म्फालेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हा म्फालेको देखेपछि स्थानीयवासीले विनयलाई जी वितै उद्धार गरेका थिए । उनकी श्रीमतीको भने निधन भैसकेको थियो । छोराहरु भने अझैसम्म फेला परेका छैनन् । नदी धमिलो भएको र पानी परिरहेकाले खोजीमा समस्या आइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए। घाइते अवस्थामा रहेका विनयको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गजुरीमा उपचार भइरहेको छ ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका—४, थानकोटमा बसोबास गर्दै आएको परिवार चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि देहत्यागको निर्णयमा पुगेको जमुनाले आफ्नो अङ्ग्रेजी नाम उल्टो बनाएर फेसबुकमा लेखेको स्टाटसमा उल्लेख छ ।
जमुनाका दाजु धादिङको गल्छी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष कपिल रेग्मीको परिवारलाई सानो छोराको पास्नी ९भातखुवाइ० मा आउँदै गरेको खबर गरेर यो परिवार सिधै बेनिघाट पुगेको थियो । विनयको घरमा ऋणका कारण आफूहरुले देहत्यागलाई नै अन्तिम विकल्पका रुपमा रोजेको ‘नोट’ भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । राजधानि दैनिकमा खबर छ ।
विनयले शेयर लगानी गर्न विभिन्न व्यक्तिबाट मिटर ब्याजमा करीब रु एक करोड ५० लाख ऋण लिएको ‘नोट’बाट पत्ता लागेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । विनयलाई देहत्याग मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताए ।
पत्नीलाई समातेर ब’गिरहेका थिए विनय : उद्धारकर्मी राजेन्द्र श्रेष्ठ
म आफू काम गर्ने रिसोर्टमा त्रिशूलीको साइडतर्फ बसिरहेको थिएँ। एक्कासि झोलुंगे पुलमा केही मान्छे ‘मान्छे ब’गायो, मान्छे ब’गायो’ भनेर चि’च्याइरहेको सुनें। म कायक चालक भएकाले हत्तपत्त कायक लिएर नदीमा पसिहालें। केही तल मान्छे ब’गाएको देखेपछि कायकलाई त्यतै लगें।
केटा मान्छे होसमै थियो। केटी मान्छेको खुट्टा समाउँदै सँगै बग्दै रहेछन्। मैले मेरो कायकमा समाउन लगाएँ। केटी मान्छेलाई आफैं समातेर पाखामा ल्याएँ। उनीहरूलाई बाहिर ल्याउँदा केटी मान्छे बे’होस थिइन्। सायद उनको निधन भइसकेको थियो। उनीहरूलाई पाखा ल्याएपछि मात्रै दुई बच्चा पनि थियो भन्ने थाहा पाएँ। मैले नदीमा भने देखिनँ। पुलमा बस्नेहरूले बच्चा पनि ब’गेको देखेका रहेछन्। अलिक तलसम्म त पुगेर खोजी गर्‍यौं तर बच्चा फेला पार्न सकिएन। यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
नेपालीको सपना अन्तत पूरा हुने : १७ करोड भुक्तानी भइसकेको नेपालको रेल भारतमा तयार, फ्रेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल आउने
काठमाडौँ । आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने नेपालको सपना अन्ततः पूरा हुने भएको छ । ढिलामा
क्यानाडाको आकाशमा नेपाली चेली पाइलट,को हुन् त यिनी हेर्नुहोस ? सम्मान स्वरूप शेयर गरौ!
हिजो उनी टेक्सस् थिइन्, आज टोरन्टो। भोलि र पर्सी छुट्टी, घरै बस्छिन् । शुक्रबार टोरन्टो